पुरुष क्रिकेट हुँदा भरिभराउ टियु ग्राउन्ड महिला लिगमा पिन ड्रप साइलेन्स !
काठमाडाैं– त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट ग्राउन्ड । नेपाली क्रिकेट प्रेमीलाई यो स्थानको धेरै माया छ, पक्कै पनि धेरैले यो ग्राउन्डका आआफ्ना कथाहरु बटुलेका छन् ।
एउटा समय हुन्छ, जब यहाँ पुरुष क्रिकेट हुन्छ, तब टिकट पाउन पनि हम्मे हम्मे पर्छ । अनि मिडियामा छापिन्छन् वरपरका रुखमा चढेर क्रिकेट हेरिरहेका क्रिकेट प्रेमीका तस्वीरहरु ।
हजारौँ दर्शकलाई एकैपटक क्रिकेटको मायामा पार्न सक्ने यो क्रिकेट मैदानमा कुनै खेल भइरहेको छ तर औंलामा गन्न सकिने दर्शकमात्र छन् भन्दा कसलाई विश्वास होला र ?
विश्वास नगर्नुको कुनै अर्थ छैन । किनकि अहिले यही मैदानमा महिला च्यम्पियनसिप लिग सुरु भएको छ । अनि जति खेलाडी र आयोजक छन्, त्यहाँभन्दा दुईचार जनाबाहेक अरु दर्शक नै छैनन् ।
बरु आयोजकले त्यहाँ सहज बनाएको छ । पुरुष क्रिकेट हेर्न पुग्दा टिकट काट्नु पर्ने यही मैदानमा महिला क्रिकेट हेर्न जाँदा निःशुल्क प्रवेश पाइन्छ । तैपनि महिला च्याम्पियनसिप लिगमा दर्शक छैनन् ।
बुधबार दिउँसो च्याम्पियनसिपको पहिलो खेल चलिरहेको थियो । हामी मैदानमा पुग्यौँ । दर्शकदीर्घामा वरपर हेर्दा दर्शक नै देखिएनन् ।
‘आज बिदाको दिन पनि होइन, त्यसैले पनि हुनसक्छ,’ त्यहाँ क्रिकेट हेर्न पुगेका अभियान श्रेष्ठले भने, ‘आफ्नै मैदानमा महिला क्रिकेट हेर्न पाउँदा मलाई पनि खुसी त लागेको छ । तर, दर्शक नै नहुँदा अलिक खल्लो हुँदो रहेछ ।’
हुन पनि क्रिकेट त्यस्तो खेल हो, जहाँ जब चौका र छक्का प्रहार हुन्छ, दर्शकबाट आउने हुटिङले त्यसलाई अझ सानदार बनाइदिन्छ । अथवा बोल्ड हुँदा वा विकेट जाँदा नै किन नहोस्, दर्शकदीर्घाको हुटिङले माहोल नै फरक बनाइदिन्छ ।
तर, बुधबार अभियानसँग हुटिङ गर्ने दर्शक त्यहाँ खासै कोही थिएनन् ।
औंलामा गन्न सकिने केही दर्शकमध्ये एक थिए, विशाल अधिकारी । ‘भर्खर सुरु भएको हो यो महिला लिग,’ उनले भने, ‘तर, आजको खेलमा पनि यति थोरै दर्शक आउनु त निराशाजनक नै हो नि ।’
प्रकाशित मिति : असोज २९, २०७६ बुधबार १६:३१:३०,